Alaghachi na ikike mwepu - THE INDIAN FACE
Alaghachi na ikike nke iweghachi
1. Alaghachi maka nrụpụta nrụpụta.
Onye ọrụ nwere ike ịlaghachi na ya THE INDIAN FACE, ngwaahịa ọ bụla nke na-eweta ntụpọ nrụpụta. N’iburu n’uche maka ngwaahịa nkwekọrịta a, Onye ọrụ ahụ ga-enwe oge otu ọnwa iji kparịta ụka THE INDIAN FACE enweghi nkwekorita nke ha na ha. Ọ bụrụ na oge a gafere, Onye ọrụ ga-ewere mmebi ọ bụla.
Iji hazie nlọghachi ahụ, Onye ọrụ ahụ ga-akpọtụrụ THE INDIAN FACE N'ime oge otu ọnwa, rue na kọntaktị adreesị @ theindianface .com, na-egosi ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa a ga-eweghachi, na-ejikọ foto na ndepụta zuru oke nke ntụpọ dị na ya
N'otu oge THE INDIAN FACE enwetala nkwukọrịta ahụ site n'aka Onye ọrụ, ọ ga-agwa gị n'ime ụbọchị azụmaahịa 3-5 ka ịlaghachite ngwaahịa a ma ọ bụ na ị gaghị alọghachi. Ọ bụrụ na nlọghachi na-apụta, THE INDIAN FACE Ọ ga - egosi onye ọrụ ya ịnakọta ma ọ bụ zigara ngwaahịa ahụ mebiri emebi n'ọfịs / ụlọ nkwakọba ihe ha.
Ngwaahịa ọ bụla a ga-eweghachite ga-eji ya dobe ya na aha ya niile, nkwakọ ngwaahịa yana, ebe okwesịrị, akwụkwọ na ihe ngwa ahịa ndị ejiri soro ya. Ọ bụrụ na Onye ọrụ ahụ anaghị aga n'ihu n'ụzọ dị otu a. THE INDIAN FACE Ọ nwere ikike ịjụ nloghachi.
Ozugbo anabatara ngwaahịa ma gosipụta ntụpọ, THE INDIAN FACE ga-enye Onye ọrụ ahụ ohere iji ihe ọzọ ejiri arụ ọrụ dochie ngwaahịa ahụ, belụsọ na nhọrọ a agaghị ekwe omume ma ọ bụ ziga ya maka THE INDIAN FACE.
Ọ bụrụ na enweghi ngwaahịa, ngwaahịa ọzọ nke nwere njiri mara ya enweghị ike izipu ya, Onye ọrụ ahụ nwere ike ịhọrọ kwụsị nkwekọrịta (ya bụ, nkwụghachi nke ego a kwụrụ) ma ọ bụ rịọ ka ebuga ya n'ụkpụrụ ọzọ Onye ọrụ ahụ ji aka ya họrọ.
Nnyefe ngwaahịa a na njiri mara ya ma ọ bụ ihe nlereanya ọhụụ nke Onye ọrụ ahụ họọrọ, dịka o kwesiri, ga-eme ya na ụbọchị azụmaahịa 3-5 na-esote site na ụbọchị a. THE INDIAN FACE Onye ọrụ ahụ ga-akwado maka ndochi ngwaahịa mebiri emebi ma ọ bụ mbubata nke usoro ọhụrụ ahụ.
Onye nnọchi anya, izipu nke ihe nlere ohuru ma obu ikwusi nkwekorita a apughi igosi ego ozo maka Onye ọrụ.
Ọ bụrụ na Onye ọrụ ahụ akwụsị nkwekọrịta ahụ, THE INDIAN FACE ga-eme ka nkwụghachi nke ego a kwụrụ Onye ọrụ zụrụ ngwaahịa ahụ nwere nsogbu.
THE INDIAN FACE na-agwa ndị ọrụ na oge maka nlọghachi nke ego a kwụrụ ga-adabere n'ụgwọ ịkwụ ụgwọ nke Onye ọrụ ahụ gaara eji mgbe ịzụta ngwaahịa a.
Na mmemme na Onye ọrụ anaghị enwe afọ ojuju na ngwaahịa enyere n'usoro ya, Onye ọrụ ahụ, dabere na iwu Izugbe maka nchekwa nke ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ, ga-enwe oge iri na anọ (15) ụbọchị iji laghachite ngụkọta ahụ. nke iwu ma ọ bụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ, ịnwere ike ịlaghachi ngwaahịa ọ bụla mejupụtara iwu niile na enweghị ntaramahụhụ yana na-enweghị mkpa igosipụta ihe kpatara ya.
Agbanyeghị, Onye ọrụ ọrụ ahụ ga-eburu ọnụ ahịa ego ọ ga-alaghachi THE INDIAN FACE, ma ị na-eweghachi iwu ahụ n'uju ma ọ bụ kpebie ịlaghachi naanị ụfọdụ ngwaahịa n'usoro a.
Iji mezie nlọghachi, ị ga-akpọtụrụ THE INDIAN FACE Na adreesị kọntaktị @ theindianface .com, site na izipu mpempe akwụkwọ ndọrọ ego ahụ ejikọtara na Usoro na Ọnọdụ ndị a dị ka ANNEX 1. Ozugbo enwetara nkwukọrịta a, THE INDIAN FACE Ọ ga - egosi ụzọ isi zipu iwu ya n'ọfịs ya ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe ya.
THE INDIAN FACE abụghị ọrụ maka ụlọ ọrụ na-enye ozi na Onye ọrụ na-enye ọrụ iji weghachi ego ahụ. N'echiche a, THE INDIAN FACE na-atụ aro ka Onye ọrụ ahụ chọrọ ụlọ ọrụ na-eburu ozi ozi iji nye gị ihe akaebe nke nnyefe ozigbo ozigbo debere ngwaahịa ahụ n'ụlọ ọrụ THE INDIAN FACE, ka Onye ọrụ ahụ mata na enyefela ngwaahịa ahụ n'ụzọ ziri ezi THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE Ọ bụghị maka adreesị ebe Onye ọrụ ahụ zitere iwu maka ịlaghachi. Ọ kwesịrị ịbụ ọfịs anyị mgbe niile maka Europe. Ọ bụrụ na anyị enweghị nkwenye nnyefe yana onye ọrụ ewepụtaghị nnabata nnyefe, THE INDIAN FACE agaghị enwe ihe kpatara mbibi ahụ ọ ga - abụ onye ọrụ ga - ekwu na ụlọ ọrụ ụgbọ njem ahụ edokọrọ ọrụ.
Onye ọrụ ga-eburu ego nke iweghachi ego (dị ka mbupu ụgbọ elu site na ụlọ ọrụ ndị na-ebugharị ebugharị) ozugbo.
Ekwesịrị itinye ngwaahịa a na aha ya niile, nkwakọ ngwaahịa na, ebe okwesiri, akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ejiri wee soro ya. Ọ bụrụ na Onye ọrụ ahụ aga n'ihu n'ụzọ dị otu a ma ọ bụ na ngwaahịa a emebiwo ihe ọ bụla, Onye ọrụ ahụ nabatara na ngwaahịa ahụ nwere ike ịda mba ọnụ ma ọ bụ nke ahụ. THE INDIAN FACE enwere ike iju ịlaghachi.
N'otu oge THE INDIAN FACE lelee ma usoro a dị mma, THE INDIAN FACE ga-aga n’ihu iweghachi ego ole Onye ọrụ kwụrụ.
Ọ bụrụ na Onye ọrụ ahụ ekpebie iweghachi usoro ahụ n'uju, THE INDIAN FACE ga-alaghachikwuru Onye ọrụ ahụ ego niile ọ gaara akwụ ma ọ bụrụ na ọ laghachila azụ ngwaahịa ọ bụla, ọ bụ naanị akụkụ nke dabara na ngwaahịa ndị ahụ ka a ga-eweghachi.
THE INDIAN FACE na-agwa ndị ọrụ na oge maka nlọghachi nke ego a kwụrụ ga-adabere n'ụgwọ ịkwụ ụgwọ nke Onye ọrụ ahụ gaara eji mgbe ịzụta ngwaahịa a. Ka o sina dị, THE INDIAN FACE ga-eweghachi ego ahụ akwụpụrụ ozugbo enwere ike yana, n'ọnọdụ nke ọ bụla, n'ime ụbọchị kalenda iri na anọ malite ụbọchị enwetara ngwaahịa a lọtara.
Iwu Ngbanwe ahia
THE INDIAN FACE ekwetaghị ngbanwe n’etiti ngwaahịa Onye ọrụ zụrụ maka ngwaahịa ọzọ enyere na Weebụsaịtị.
Na ihe omume achọrọ ka Onye Okike gbanwee mgbanwe dị na ngwaahịa a, ha ga-egorịrị ikike ikike mwepụ ya na otu ha siri kwupụta na ahịrịokwu 6.2 ma emesịa zụta ngwaahịa ọhụrụ ha chọrọ.